စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများ: ☛ WELCOME TO MYANMAR NURSES IN SINGAPORE
Home ရည်ရွယ်ချက် ☛ WELCOME TO MYANMAR NURSES IN SINGAPORE
☛ WELCOME TO MYANMAR NURSES IN SINGAPORE
Post under ရည်ရွယ်ချက် at 12/15/2009 04:56:00 PM Posted by MYANMAR NURSES IN SINGAPORE
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများအားလုံးကို စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများ ဘလော့ဂ် သို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ကျနော်တို စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများဘလော့ဂ် (www.myanmarnurses-sg.com)ကို 15.12.2009 မှာ စတင်ခဲ့တာပါ။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပြောင်းလဲနေသော ခေတ်နှင့်အညီ စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများအချင်းချင်း တွေ့ဆုံခွင့်၊ အသိပညာများနှီးနှောဖလှယ်ခွင့်၊ ဒေသန္တရ ဗဟုသုတ အတွေ့အကြုံများ၊ မတူညီသော လူနေမှု ဓလေ့ထုံးစံများ၊ ခံယူချက်အတွေးအခေါ်များ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ် သုတရသများ စသည့် အတွေးအမြင်၊အတွေ့အကြုံ ခံယူချက် အမျိုးမျိုးကို မျှဝေဖလှယ်နိုင်ရန်နှင့် နယ်ခြားမြေခြားတွင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်အခက်အခဲရှိပါက ကူညီခွင့် ရကြစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဘလော့ဂ်ထဲတွင် ကော်မဲန့်ပေးခြင်းဖြင့် ၀င်ရောက်အကြံပေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းများ၊ အသိပညာများပေးခြင်းပြုလုပ်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
8 comments: on "☛ WELCOME TO MYANMAR NURSES IN SINGAPORE"
Yes, very good...we can share our knowledges and we can find old friends and colleagues here..This will be useful for us..
Hi friends,pls join and sign in this blogs.
You can edit your profile, put your photo and your information such as contact number..
All friends, please join...
ko shan kyi said...
hi dear all myanmar nurses, finally our myanmar nurses blogs coming true on the web, i really proud of it and many many thanks to our friends who created it. so , i would like to invite all our brothers & sister to join the blogs. thank again for the blogs.
Dear all brothers & sisters nurses, if you would like to post comment to our blogs,
step 1. write your comment
step 2. select profile click on(Google account)
step 3. click on ( preview)
step 4. key in the words appearing in the box and
step 5. click on (post comment)
အားလုံးကိုယ်စားဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ Keep in touch !!!!!!!
စင်္ကာပူရောက်သူနာပြုများကို အခုလို ဒီနေရာမှာ တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ဒို့တတွေ ဒီနေရာမှာ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်
အသိပညာတွေ၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေ၊ ကူညီမှုတွေ၊ လိုအပ်တဲ့ infomations လေးတွေကို ဖလှယ်ကြရအောင်.....
အထက်ပါ ကိုရှမ်းကြီး ပြောတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ ဗဟုသုတများကို မျှဝေနိုင်ပါတယ်....ဒီဘလော့ဂ်ဟာ စင်္ကာပူရောက် သူနာပြုများရဲ့ ပုံရိပ်များတွေပါ...
i hope we'll meet here.
..Hi!..all my friend!!!
..Greeting from here..Just wanted to get offaquick note to you..
..to let you know that.."Myanmar Nurses Blogs" is already created..
I'm indeed interested in this Blogs ..and you?..It is not onlyashare our Feeling,Knowledge & Information but also "enjoy" our leisure time by Listening,Watching,Reading & Learning as your desire ..So,..all my Friend!!..Lets Join now!!
Dear all brothers & sisters myanmar nurses, I heard some news from my friends re: some of our brothers & sisters not happy in our MYANMAR NURSES IN SINGAPORE BLOG. Honestly say this blog is meant for all myanmar nurses who are working in singapore to know and share knowledges each others.This blog is non-profit blog.We are not differentiate whether BNSc or Diploma nurses. We are warmly welcome and invite all myanamar nurses to join and friendly each others , unite for our myanmar nurses future.So i hope all our brothers & sisters (myanmar nurses) understand on it. Thank you!